SITUATION SEVERE IN SHIPPING FIREWORKS-Indostria News-FIANGONY CHILI
Vaovao ho antsika
SITUATION SEVERE IN SHIPPING FIREWORKS
Tsy misy afa-tsy 3 volana miala ny 4 Jolay (Fetin'ny Fahaleovan-tenan'i Amerika), ary andro iray tena lehibe ho an'ny Amerikanina izay heverina fa hankalaza ny andro tena manokana amin'ny afomanga. Ny afomanga marobe dia tsy maintsy alefa amin'ny tany amerikana alohan'ny volana mey rehetra. Na izany aza, toa nijery toe-javatra somary nampalahelo tamin'ny taona 2021 ireo mpanafatra afomanga amerikana.
Toeran'ny sambo kaontenera, 13 jan. (Sarintany: MarineTraffic)
Ny olan'ny fitaterana dia ny aretin'andoha hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana tamin'ny taona 2019, namorona andiana tsy fahampian'ny kaontenera tao anatin'izay volana vitsy lasa izay ary ny fantsom-pifamoivoizana any amin'ny seranana maro amin'izao fotoana izao. Ny areti-mandringana dia nanakorontana ny varotra tamin'ny ambaratonga miavaka, nampiakatra ny vidin'ny fandefasana entana ary nanampy fanamby vaovao ho an'ny fanarenana ara-toekarena manerantany, indrindra ny indostrian'ny afomanga.
"Ny areti-mifindra dia nahatonga ny tambajotram-pitaterana eran'izao tontolo izao ho korontana tanteraka miteraka sakana isaky ny mandeha", hoy ny filohan'ny NFA Steve Houser sy ny mpikambana NFA maherin'ny 1,300, tompona orinasa mpiompy ary mpiasan'ny afomanga nanoratra tany amin'ny Departemantan'ny fitaterana. “Manoratra izahay mba hangataka anao hijery avy hatrany ny seranan-tsambon'ny firenentsika sy ny fotodrafitrasa fitaterana hahitantsika hoe aiza ny tavoahangy, ary ampiharo avy hatrany ny fanovana ilaina amin'ny fampandehanana ny rafitra ary avereno amin'ny fepetra mialoha ny COVID-19. Raha tsy vita izany ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia matahotra izahay sao tsy hisy intsony ny vanim-potoana afomanga amin'ity taona ity. ”
------ avy amin'ny saveourfireworks.blogspot.com
Andao handre izany momba ny vaovao
“Tsy mbola nahita zavatra toy izany aho”, hoy i Lars Mikael Jensen raha nanontanian'i Washington Post, lehiben'ny Global Ocean Network ao amin'ny AP Moller-Maersk, orinasa mpandefa entana lehibe indrindra manerantany. “Ny rohy rehetra ao amin'ny rojo famatsiana dia mihinjitra. Ny sambo, ny kamio, ny trano fanatobiana entana. ” Araka ny tatitra nataon'ny NFA (National Fireworks Association), ny fotoana fandefasana entana avy any Shina mankany Etazonia dia nitombo 30 ka hatramin'ny 60 andro, ary ny vidin'ny fandefasana kaontenera misy afomanga efapolo metatra izay nitombo avo roa heny ny vidiny $ 9,300 ka hatramin'ny 17,700 21 $ isaky ny kaontenera. Ary farany, maharitra 1,300 andro izao ny famoahana sambo fitaterana entana ao amin'ny seranan-tsambon'i Long Beach, California. Ity misy taratasy iray hisarihana ny saina amin'ireo olana atrehin'ny fitaterana, ny lojika ary ny firaketana ny indostrian'ny afomanga amerikana ho an'ny Departemantan'ny fitaterana any Etazonia, nataon'ny filohan'ny NFA Andriamatoa Steve Houser, ary noforonin'ny mpikambana NFA maherin'ny XNUMX, tompona afomanga sy ny mpiasa.
Ny sisa amin'ireo anarana vita sonia tsy aseho amin'ity andalana ity
Ora fanokafana: Mon ~ Fri: 8:30 - 17:00
ADD: Lixin Village, Yangsanshi Area, Liling, Hunan, Sina
Ampidiro ny adiresy mailakao hisoratanay ny vokatra farany sy ny vaovao, mijanona ho vaovao.